Skirt miaraka amin'ny tavy
Tombontsoa ny tara-pokon-tanim-pirahalahiana nalaina tamin'ny alàlan'ny mpahaingo lamaody Yves Saint Laurent tamin'ny taonjato faha-20. Tena marina ity fanangonana ity ary ankehitriny. Ny jirobe amin'ny tara-potoana dia mahira-tsaina, mifety ary miara-dia tsotra sy isan'andro. Ny fahasamihafana dia samy hafa amin'ny lokon'ny lamba, ary amin'ny loko sy ny haben'ny voa.
Ny akanjom-bozaka dia mety kokoa amin'ny vanim-potoana mafana. Ny tena manan-danja dia ny fisafidianana ny habeny. Tsara ny mitadidy fa ny tandrok'ondry lehibe dia mampitombo ny habetsahan'ny tarehimarika, izay mety tsara kokoa sy malefaka kokoa.
Modely modely sy loko misy pataloka poopy
Tena tsara tarehy ny mijery ny morontongotra amin'ny tara-potoana manapaka ny masoandro. Ny fiantraikan'ny tondra-drano mandritra ny fihetsiketsehana dia mahatonga ny vehivavy ho hentitra sy tsy hay tohaina. Matetika no misy kofehy masoandro ny akanjon'ny masoandro, izay ahafahana mampiasa azy amin'ny endriny rehetra. Indrindra raha manao kofehy monofilo ianao. Mampihena ny habeny koa izy io.
Ny mpanao lalàna lamaody dia nampiditra an'izao tontolo izao lamba mainty hoditra ho fotsy fotsy. Fa ny skirt polka-dot mena dia tsy manintona sy mavitrika. Ny loko mena dia manome endrika mamiratra ary tsy matevina toy ny mainty. Ankoatra izany, ny akanjo toy izany dia hiantso ireo tia ny fitafiana mamirapiratra.
Fitsipika tsy mety
Inona no hodinihina rehefa mifidy ny halavany:
ny fampitahana sy ny haben'ny tarehimarika;
Noho izany, ny lavaka lava be dia be ho an'ny vehivavy lava sy malefaka. Mazava ho azy fa zava-dehibe ny loko sy ny haben'ny voany. Lehibe, indrindra fa amin'ny fotsy fotsy, dia tsy mifangaro amin'ny vehivavy masiaka, satria mampitombo ny habeny izany.
Fa ny teboka bitika kely amin'ny tara-pahazavana kosa dia afaka manamaivana ny tsy fahampian'ny sary, toy ny boom mivadika. Saingy ny akanjovavy amin'ny tara-pokontany, indrindra fa ny kely, dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny vehivavy sy ny tovovavy. Ilaina ny vokatra avy amin'ny lamba toy izany mba hisafidianana akanjo na fitaovana mifanohitra amin'izany.
Famolavolana ny akanjo
Fivarotana any Rhodes
Toe-paty - modely tsara sy maotina
Blouses from guipure and lace
Ny tain'akanjo vaovao amin'ny taom-baovao - fankalazana fety ho an'ny fianakaviana iray manontolo
Sarafàna maivana ho an'ny vehivavy bevohoka
Scarlett Johansson, na dia eo aza ny fanangonan-tsaho, dia hilalao amin'ny "Ghost in the Shell"
Sakamamy misy zava-manitra any an-tsekoly
Mipetraka ny feso
Ahoana no tokony hikarakarana zazavavy mendrika?
Salady salady roast
Tao amin'ny banga, samy nomelohin'ny roa: Nihomehezana niaraka tamin'i Hiddleston i Swift, nitaingina namana i Harris
Ahoana no hianaranao hahatakatra ny lahatenin'ny teny anglisy amin'ny sofinao?
Kitapom-panamboarana ny rindrina ao an-trano
Inona no asehon'ny kitay?
Vitaly Sedyuk dia manoroka an'i Kardashian sy ny hafa manararaotra mpanao gazety malaza
Tora-kofehy rindrina ho an'ny rindrina
Karelia - fiaramanidina
Otitis amin'ny alika
Kronos - ny angano an'i Kronos sy ny zanany
Voa maina - kalôria votoaty